.မွငျနကွေပုံစံလေးနဲ့မတူပဲ ခပျမိုကျမိုကျပုံစံနဲ့ အထာကလြှနျးနတေဲ့ ပိုးမမှီသာ. – Askstyle
.မွငျနကွေပုံစံလေးနဲ့မတူပဲ ခပျမိုကျမိုကျပုံစံနဲ့ အထာကလြှနျးနတေဲ့ ပိုးမမှီသာ.
မြင်နေကြပုံစံလေးနဲ့မတူပဲ Bad Girlတစ်ယောက်လို အထာကျလွန်းနေတဲ့ ပိုးမမှီသာ
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် သီဆိုတဲ့ Music ဗီဒီယိုလေးတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း အနုပညာလောကထဲ ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ပိုးမမှီသာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ ဆရာဝန် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေ လည်း လုပ်ဆောင်နေကာ ယခုချိန်မှာတော့ နေရာ တစ်ခုထိ ရောက်ရှိအောင်မြင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ လက်ခံ ရိုက်ကူးနေကာ ပရိသတ်တွေ အားပေးထောက်ခံမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း ကျစ်လစ်သွယ်လျပြီး အချိုးအစား ညီမျှနေတာကြောင့် ပုရိသတွေ အကြား ရေပန်းစားကာ အောင်မြင်နေတဲ့ သူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စကားပြောဆို ဟန်ကလည်းချစ်စရာကောင်းပြီး ဟန်ဆောင်မှု ကင်းတဲ့ အပြုံးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ အားပေးထောက်ခံ နေကြတာ ဆို ရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ယခုအခါမှာတော့ အထာကျကျ ပို့စ်ပေးကာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ချပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြင်နေကျပုံစံ မဟုတ်ပဲ ပိုးမမှီသာ တစ်ယောက် အထာကျကျ မိမိုက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံလေးတွေထဲမှာ ပိုးမမှီသာ ဟာ စွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့အပြုံး ညို့အားပြင်းတဲ့ အကြည့်တွေ ကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရင်ခုန်စေမှာတော့ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရည်ကလည်း ချောမောလှပနေပြီး နိုင်ငံခြား သူလေးလို ချစ်ဖို့ကောင်းနေကာ ခပ်ဆိုးဆိုး ကောင်းမလေးဟန် ပုံလေးတွေနဲ့အတူ “ဘက်စုံထူးချွန် လူဇိုးမ အမှတ်တရ ….
Thanks for 2M views ..”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေး တပ်ပြီး ဖော်ပြလာတာကို ပရိသတ်တွေ အတွက်ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်…..။
ဒီတဈခေါကျမှာတော့ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ သီဆိုတဲ့ Music ဗီဒီယိုလေးတှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျရငျး အနုပညာလောကထဲ ရောကျရှိခဲ့တဲ့ မငျးသမီးခြောလေး ပိုးမမှီသာပဲ ဖွဈပါတယျ။
သူမကတော့ ဆရာဝနျ တဈဦးဖွဈပွီး အနုပညာ အလုပျတှေ လညျး လုပျဆောငျနကော ယခုခြိနျမှာတော့ နရော တဈခုထိ ရောကျရှိအောငျမွငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ လတျတလောမှာလညျး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှေ လကျခံ ရိုကျကူးနကော ပရိသတျတှေ အားပေးထောကျခံမှုကို အခိုငျအမာ ရရှိထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျကလညျး ကဈြလဈသှယျလပြွီး အခြိုးအစား ညီမြှနတောကွောငျ့ ပုရိသတှေ အကွား ရပေနျးစားကာ အောငျမွငျနတေဲ့ သူလေးလညျး ဖွဈပါတယျ။ စကားပွောဆို ဟနျကလညျးခဈြစရာကောငျးပွီး ဟနျဆောငျမှု ကငျးတဲ့ အပွုံးတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှေ အားပေးထောကျခံ နကွေတာ ဆို ရငျလညျး မမှားပါဘူး။ ယခုအခါမှာတော့ အထာကကြ ပို့ဈပေးကာ ရိုကျကူးထားတဲ့ ပုံလေးတှေ ကို သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ ခပြွလာတာပဲ ဖွဈပါတ
မွငျနကေပြုံစံ မဟုတျပဲ ပိုးမမှီသာ တဈယောကျ အထာကကြ မိမိုကျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီပုံလေးတှထေဲမှာ ပိုးမမှီသာ ဟာ စှဲဆောငျမှု ရှိတဲ့အပွုံး ညို့အားပွငျးတဲ့ အကွညျ့တှေ ကွောငျ့ ပရိသတျတှေ ရငျခုနျစမှောတော့ အမှနျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ရုပျရညျကလညျး ခြောမောလှပနပွေီး နိုငျငံခွား သူလေးလို ခဈြဖို့ကောငျးနကော ခပျဆိုးဆိုး ကောငျးမလေးဟနျ ပုံလေးတှနေဲ့အတူ “ဘကျစုံထူးခြှနျ လူဇိုးမ အမှတျတရ ..
Thanks for 2M views ..”ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျလေး တပျပွီး ဖျောပွလာတာကို ပရိသတျတှေ အတှကျပွနျလညျ မြှဝပေေးလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျနျော….